सिनेमा रामकहानी हेरेपछि
गफगाफ - यो साता प्रदर्शनमा आएको चलचित्र रामकाहानीले हाल राम्रो व्यापार गरिरहेको छ । जसरी चलचित्र प्रदर्शन अघि प्रचार प्रचारका निम्ति रात दिन नभनी खटिएको थियो ,त्यसरी नै चलचित्र युनिट दर्शकलाई चलचित्र हेर्नका निम्ति प्रोत्साहन गर्न दिन रात हलहरुमा पुगिरहेका छन् । त्यस सगै दर्शकशरु बाट प्रतिकृया लिन समेत भ्याइ रहेका छन् । दर्शकले पनि चलचित्रलाई रुचाएका छन् । कति पय दर्शकहरु चलचित्र हेरेर निस्कदा आँखा भरि आशुका ढिक्का लिएर निस्किन्छन र चलचित्रका रियल कलाकारलाई सामुन्नेमा देखे पछि डाको छोडेर राएको दृष्यहरु प्नि देखिने गर्छ । सुदर्शन थापा द्धारा निर्देशित चलचित्र रामकाहानी समग्रमा राम्रो बनेको छ । पुजा शर्माको लोभ लाग्दो फ्यान फलोइङले पनि चलचित्रलाई फाइदा पुर्याएको छ ।
त्यस माथी पनि निर्देशक सुदर्शन थापा प्रेम कथामा आधारित चलचित्र निर्माण गर्न माहिर मानिन्छन् । यसको उदाहरण उनले निर्माण गरेका यस अघिका चलचित्रहरु प्रमगीत, म यस्तो गीत गाउछु लगायतले प्रस्तुत गरिसकेका सकेका छन् । चलचित्रमा कमेडी कलाकारहरुको बाहुल्यता रहेको छ । र उनिहरुले चलचित्रमा मसला थप्नका निम्ति महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेका छन् । चलचित्रमा पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठ बिचको प्रमलाई निकै आकर्षक ढंग बाट प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । पुजा शर्मा चलचित्रको मुख्य अभिनेत्री सगै निर्मात्री समेत हुन् । प्रेमभाव, कमेडी, पारिवारिक अवस्था,बैदेशिक रोजगारी, लगायत हरर चलचित्रको को झल्को समेत दिने गरि चलचित्रको कथा वस्तुलाई समयोजन गरिएको छ । हलमा चलचित्र हेर्न गए पस्चात २ घन्टा दर्शकलाई अन्यत्र सोच्न नदिने गरि चलचित्रको निर्माण गरिएको छ ।चलचित्र कमेडी सगै प्रेम कथामा आधारित छ । तर दर्शकले जसरी सोच्ने गरेका हुन्छन्, त्यो भन्दा विल्कुलै फरक प्रेमभाव चलचित्रले प्रस्तुत गरेको छ ।
चलचित्रको कथा कस्तो छ त ?
कथा वैदेशिक रोजगारीका निम्ति गएका केहि युवाहरु बट सुरु गरिएको छ उनिहरु वैदेशिक रोजगारमा गएर पनि त्याँहाको जेल जिवन बिताइरहेका हुन्छन् । उनिहरु कुनै गल्ति बिनै जेल सजाय भोग्न बाध्य भएका हुन्छन् । उनिहरु जेल भित्रै आफ्नो मृत्युको पर्खाइमा हुन्छन् । उनिहरु मध्य एक जना युवा राम (आकाश श्रेष्ठ) निकै भावुक हुन्छन् । अन्य तिन साथीहरुको भन्दा उनको स्वभाव विल्कुलै फरक हुन्छ । उनि बारम्बार सगै जेल चलान भएका साथीहरु लाई सम्झाइरहेका हुन्छन,हामीलाई केहि हुदैन, हामी जसरी पनि आफ्नो भुमि नेपाल फर्किन्छौ ।
ट्रेकिङ गाइडको काम गर्दा माया र रामको माँया बसेको हुन्छ । राम परिवारको कर कापमा परेर विदेश आएका हुन्छन् तर विदेशमा पनि उनलाई मायाकै यादले घरि घरि तड्पाइ रहन्छ । रामलाई विश्वास छ, मायासँग गरेको प्रमिश (बचन)ले बचाएर उनलाई नेपाल फर्काउने छ । तर, भित्रभित्रै उनीहरुलाई मरुभूमिमा लगेर गोली हानी मार्ने तयारी गरिन्छ । उनिहरुलाई सबैको पास्पोर्ट दिइन्छ र लिएर भाग्न भनिन्छ र मरुभूमीतिर दौडाइन्छ । त्यस पछि पछाडीबाट गोली प्राहार गरिन्छ ।
त्यसपछि के हुन्छ ?उनिहरु कसरी आफ्नो प्राण जोगाएर स्वदेश र्फकन्छन् ? वा त उतै उनिहरुको मृत्यु हुन्छ ? त्यो भने हलमा मै गएर चलचित्र हेरे पछि मात्र थाहा हुने छ । यसरी चलचित्र सुरु भए पनि चलचित्रको मुल कथाले भने यस संग कुनै सम्वन्ध राखेको छैन ।
चलचित्रको राम्रो पक्ष ?
कमेडी कलाकारहरुको बाहुल्यता हुनुले चलचित्र हेरिरहदा दर्शकहरुलाई खुलेर हास्न बाध्य बनाएको छ । उनिहरुको उपस्थती नै चलचित्रको सफल व्यापार गर्ने मध्यको एउटा महत्वपुर्ण कारण बनेको छ । केदार घिमिरे, विल्सन विक्रम राई, रविन्द्र झा लगायतका हास्य कलाकारहरु दर्शकको खुलेर हास्ने माध्यम बनिदिएका छन् ।
धेरै नेपाली चलचित्रहरुको कमजोरी पक्ष एउटै हुन्छ । दर्शकले हलमा गएर चलचित्र हेर्न थाले पछि सुरुवाती चरणमै चलचित्रको अन्त्य सम्मको अनुमान लगाउछन् र वास्तविक पनि त्यहि पाउछन् । र दिक्क मानेर चलचित्र हलबाट निस्कन्छन त्यो पनि नेपाली चलचित्र अब कहिलै नहेर्ने गरि । तर यो चलचित्रले भने त्यो अवसर दर्शकलाई दिएको छैन । दर्शकले अनुमान जे गरेका हुन्छन् तर त्यहि कुरालाई निकै आकर्ष ढंगबाट मोडिएको छ । र चलचित्रको मुख्य कथाबस्तु बनि यहि नै हो
गल्ती महशुस भएको कुरा
चलचित्रको कथावस्तु,कथा, आशिंक पात्रहरु लगायतमा कुनै खोट लगाउने स्थान दिइएको छैन । तर चलचित्रमा प्रस्तुत भएको घटनाक्रम, संवाद, पात्रले प्रयोग गरेका गेटअप लगायतका कुराहरुमा भने थोरबहुत कमजोरी झल्किएको छ । कतिपय अवस्थामा सामान्य कुराहरुमा नै निर्देशकले ध्यन पुर्याउन नसकेको देखिन्छ ।